Mmiri Iju Mmiri 200W, 200W Na-asọ n'èzí, Na-enwu n'Ọdị Mmiri Dị Ukwuu 200W Na-emepụta na China
Nkọwa:Mmiri Iju Mmiri 200W,200W Ibu Iju Mmiri n'èzí,Ejiri Azụ Mmiri Dị Ukwuu 200W,200 Watt Led Bulb,,
Home > Ngwaahịa > Iju Mmiri Iju Mmiri > 200w Mmiri Iju Mmiri
Ngwaahịa nke 200w Mmiri Iju Mmiri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mmiri Iju Mmiri 200W , 200W Ibu Iju Mmiri n'èzí suppliers / factory, wholesale high-quality products of Ejiri Azụ Mmiri Dị Ukwuu 200W R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ejiri Light Bulbs 150w 120v 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwurugwu Led azụmaahịa Led azụmaahịa 200W 24000LM  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Led Stadium Ìhè 200W 24000LM 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Light Led 200 Watt 24000lm 5000k  Kpọtụrụ ugbu a
200W Igwe Ọdụdọ Ìhè na-ebu Plug 24000lm  Kpọtụrụ ugbu a
200W Na-ekpuchi Iju Mmiri Light Fixtures  Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Ìhè nke Ihu 150w anyị nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 18000lm. Ngwurugwu Iju Mmiri a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a Ighalo Ìhè Nke Udiri 120v ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị nwere ike iwunye ya...
Ìhè Ìhè nke 200w anyị nwere ike ime ka ihe na-enwu enwu dị 24000lm. Ìhè Mmiri Ego Azụmaahịa Ledara bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ.The Light Led Flood Light Fixtures 200w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,...
Ìhè Ìhè nke 200w anyị nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Light Light 250w Philips a bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ . Nke a Hyperikon Led Stadium Light 200w ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi, ị...
Ìhè Ihu Igwe anyị 200 Watt nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Ìhè Igwe mmiri a 200w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ.The Light Flood Light 200w Watt ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike...
Ìhè nke Igwe mmiri anyị na Plug 200w nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Ìhè Na-eweta Ọkụ Egbu Ala bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Singip Light Philips . Igwe a...
Ọnụahịa otu: USD 75.5 - 76 / Piece/Pieces
Ìhè Iju Mmiri 200 B Bier nwere ike mee ka ìhè dị ọcha dị 24000lm dị elu. Igwe Mmiri Iju Mmiri nke a n'èzí bụ oghere 120 Celsius, onyinyo-enweghị nnyefe ma ọ bụ mgbochi, na-enye ìhè dị mma maka ebe obibi gị mpụga ma na-agbakwụnye nchekwa ọzọ...
China 200w Mmiri Iju Mmiri Ngwa
200w Mmiri Iju Mmiri na-abia na Ogwe Ugwu nke nwere ike ime ka o kwe ka o nweta otutu nhọrọ. Ogologo Mmiri Iju Mmiri 200W na- enye nnukwu arụmọrụ, ndụ ogologo na ike nchekwa na ntanye dị mfe, nke na-adịghị achọpụta ihe ọ bụla. Nke a mere ka High Bay Ìhè 200W eweta ọhụrụ siri ike-ala Ikanam technology ka na ahịa na ojiji nke anyị onwe anyị patent rue mgbe Helios technology, nke na-enye a ezi ọkụ enwe anya na ambiance.our 200 Watt Dugara bọlbụ e mere na-amụnye ọkụ na bụghị naanị ebe dịgasị iche iche, mana enwere ike iji ya dị ka ọkwa ọkụ maka ụdị ụlọ na ụlọ niile.
Mmiri Iju Mmiri 200W 200W Ibu Iju Mmiri n'èzí Ejiri Azụ Mmiri Dị Ukwuu 200W 200 Watt Led Bulb Mmiri Iju Mmiri 600W